Sinocare dia nanome "Brand of the Year" amin'ny 10 Healthy The China Awards-News-Sinocare
Sinocare dia nanome "Brand of the Year" tamin'ny 10 Healthy The China Awards
Fotoana: 2019-08-16 Hits: 667
Ny Brand dia fananana tsy azo zahana amin'ny orinasa ary koa ny fahamendrehana sy ny laza voangona nandritra ny taona maro. Matetika ny orinasa dia miaina andiana fitsapana fotoana alohan'ny hahatongavany ho marika fanta-daza avy amin'ny kely. Zava-dehibe ny tokony hampiasan'ny orinasa kalitao hamoronana lanja, hahazoana fitokisana am-pahatsorana, hampielezana ny marika amin'ny kolontsaina, ary hahatratra ny fampandrosoana maharitra miaraka amin'ny fanahin'ny fanavaozana.
Vao tsy ela akory izay, ny lanonana famotsorana ny Fahafolon-karatra China Healthy an'ny "Healthy China 2030 Brand Plan", izay notarihin'i Vaovao momba ny fahasalamana Office, www.39.net, Herin'ny ati-doha, dia notanterahina tany Beijing, Sina. Gao Fu, izay talen'ny ivon-toerana misahana ny fanaraha-maso sy fisorohana ny aretina any China, ny filoha lefitry ny Fikambanan'ny mpitsabo sinoa ary akademisiana ao amin'ny Akademia Sinoa momba ny siansa, ary olona 9 hafa dia nahazo ny loka "Person of the Year", ary 10 ny hopitaly toa ny Hopitaly Medical College Peking Union dia nahazo ny "Hopitaly momba ny fahasalamana mahaolona amin'ny taona". Orinasa pharmaceutika 27 miavaka, ao anatin'izany ny Sinocare, no nahazo ny "Brand of the Year", "Citizens Business Citizens" ary loka hafa.
Amin'ny maha hetsika laharam-pahamehana an'ny "Drafitra Marika 2030 marika China", ny lisitry ny loka farany momba ny loka fahafolo an'ny Healthy China dia novokarina tamin'ny alàlan'ny fomba maro, izay misy ny KPMGmandinika tsara ny latsa-bato, ny fanendrena azy amin'ny alàlan'ny angon-drakitra lehibe, ny fisavana ratsy ny hevitry ny besinimaro ary ny fanaovana dokambarotra an-tserasera, ny fanombatombanana voalohany nataon'ny manam-pahaizana, ny valin'ny fanombanana ny marika, ny tomban'ezaka farany ataon'ny manam-pahaizana ary ny fanaovana dokambarotra. "Brand of the Year", Sinocare dia niavaka tamin'ny marika an-jatony. Izany dia satria tsy vitan'ny hoe mandoa ny heriny manokana ho an'ny "China Healthy", fa miezaka ihany koa amin'ny famoahana ny tanjaky ny marika sinoa.
ZHANG JIJIAO, PRESIDENT VICE OF THE INTERNATIONAL UNION OF ANTHROPOLOGIKA AND ETHNOLOGIKA SCIENCES, dia nanome fanomezana ho an'ny ENERPRISES AN-TENY FAMPANDROSOANA AN-TANY
Miaraka amin'ny nofinofy "mamela ny mararin'ny diabeta rehetra any Shina hanana metrôly glucose ao aminy manokana", dia natsangana tamin'ny taona 2002 ny Sinocare, ary nandefa ny dia hampiroborobo ny vokatra fanaraha-maso glucose amin'ny glucose mora sy fampiroboroboana ny indostrian'ny fikarakarana diabeta any Shina. Manaraka ny lanjan'ny "fanajana ny fanoloran-tenantsika sy ny fanoloran-tenantsika ho an'ny fahasalamana", Sinocare dia manolo-tena amin'ny fanavaozana ny haitao biosensing, mikendry ny fikarohana, ny famolavolana, ny famokarana ary ny fivarotana andiana vokatra fitiliana diagnostika haingana ho an'ireo marary manana aretina mitaiza sy fahasalamana matihanina fikarakarana.
Tao anatin'izay dimy ambin'ny folo taona lasa izay, miaraka amin'ny toetra mampiavaka ny "fahamendrehana, ny fahatsorana ary ny toekarena", dia nahazo fiderana avy amin'ny mpanjifa sinoa maro ny metrôly glucose glucose Sinocare. Hatreto, ny vokatray dia nanjary andian-dahatsoratra maro, ao anatin'izany ny andian-tsarimihetsika Safe AQ, andian-tsarimihetsika SAFE-ACCU, andiam-bolongana, glucose roa-metaly EA-11 & metatra asidra urika, metatra glucose amin'ny rà mandriaka ary rafitra fanaraha-maso glucose ao anaty ra manan-tsaina. Any Shina, maherin'ny 50% ny diabeta izay manara-maso ny aretina dia mampiasa vokatra Sinocare.
Amin'ny fotoana fampandrosoana tsy tapaka ny orinasanay, Sinocare dia tsy hanadino ny fiandohan'ny fo ary hanome sakafo tsy tapaka ny fiarahamonina ary hanao asa soa. Ny laharam-pahamehan'ny fandraisan'ny Sinocare anjara amin'ny asa sosialy sosialy dia ny famelabelarana ny fotokevitra momba ny fahasalamana, ny fanatsarana ny fahatsiarovan-tena momba ny fitsaboana ara-pahasalamana sy ny fiarovana ny fahasalaman'ny vahoaka. Noho izany, ny Sinocare dia mivelatra mavitrika amin'ny sehatry ny serivisy fitsaboana diabeta, mamorona ny fomba "logiciel + rindrambaiko + serivisy" ary manampy ny diabeta hahatakatra sy hahafehy ny fitantanana diabeta feno, hizotra amin'ny tanjona "hanova ny andraikitsika avy amin'ny mpamono ra metatra glucose amin'ny manam-pahaizana momba ny fitantanana diabeta ”.
Pejy mialoha: Nanatrika ny Middle Middle Middle East Medlab 2018 tany Dubai i Sinocare
Pejy manaraka: tsy misy